Los Alcatel 1C, 1S, 3 y 3L disponibles oficialmente en España | Androidsis
Iselfowuni yenza ukungena kwayo ngeefowuni ezintsha ezine kwimakethi yaseSpain. Ekuqaleni kwalo nyaka, inkampani isishiye neefowuni ezininzi kwiziganeko ezibini eziphambili zeefoni ezenzekileyo ukuza kuthi ga ngoku, i-CES kunye ne-MWC. Kumsitho eLas Vegas sele bahambisa iifowuni ezimbalwa. Kwinyanga kamva, kwi-MWC 2019 e-Barcelona nabo basivumela ngeefowuni ezintsha.
Inkampani sele isungule ezinye zazo eSpain, njenge-1X, kodwa ngoku beza neefowuni ezintsha ezine. Ukusukela ukumiliselwa kweAlcatel 1C, 1S, 3 kunye ne3L. Zonke sele zikho ngokusemthethweni eSpain.
Ezi fowuni zine zezakhe Inqanaba lokungena kunye naphakathi kwinqanaba lenkampani. I-Alcatel 1C kunye ne-1S zezona zilula, zombini ngaphakathi kuluhlu lwabo lokungena. Ngelixa ezinye iifowuni ezimbini, iAlcatel 3 kunye ne-3L zisungulwe ngaphakathi kuluhlu lwaphakathi. Kuzo zonke iimeko, beza nexabiso lemali enomdla omkhulu.
Malunga namaxabiso, Sifumana intwana yayo yonke into kwezi modeli zine. Amaxabiso abo aqala kwi-69,99 euro kwimeko yexabiso eliphantsi, ukuya kwi-189 euros kwimodeli ebiza kakhulu kuzo zonke. Ke ngoko, zinikezelwa njengoluhlu lweefowuni ezona zifikeleleka ngokubanzi. La ngamaxabiso emodeli nganye:
I-Alcatel 1C ifika ngexabiso lama-euro angama-69,99 (imibala emnyama neblue)
Iselfowuni 1S enexabiso le-109 euros (ngombala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka kunye negolide)
I-Alcatel 3 isungulwe kwiinguqulelo ezimbini: Inguqulelo ye-3/32 GB ixabisa i-euro ezili-159 kunye nenguqulelo ye-4/64 GB engu-189 ye-euro (luhlaza-mfusa nemibala eblowu-mnyama)
I-Alcatel 3L ifika ngexabiso le-139 euros (imibala emnyama neblue)
Zonke iifowuni inokuthengwa ngokusemthethweni kwiAmazon. Okwangoku, akwaziwa ukuba ziya kuphehlelelwa nakwezinye iivenkile, nangona kulindeleke ukuba kube njalo. Kodwa akukho datha inikiweyo ukuza kuthi ga ngoku malunga noku. Ke kuyakufuneka silinde ukubona ukuba kwenzeka ntoni kwezi ntsuku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Alcatel 1C, 1S, 3 kunye ne-3L isungulwe ngokusesikweni eSpain
UGoogle ucacisa isizathu sokubandakanya i-headphone jack kwiPixel 3a entsha